Archive du 20190618
27 lahy eny Tsiafahy Hampiady ny Miaramila sy ny Mpitsara
Ampihorohoroana ny mpitsara mba hamoaka ireo miaramila 27 naiditra am-ponja noho ny raharaha famonoana olona miisa 3 avy any Ambohimahasoa natsipy tao amin’ny reniranon’i Onive teny Ampitatafika distrikan’Antanifotsy hita ny 31 mey teo.
Vina IEM Lasa vono HVM
Toy ny manondraka rano an-damosin’ny gana daholo ankehitriny ireo vondrona sy antoko politika ary rafitra hafa miantso fifamelana amin’ny fitondrana ankehitriny ary tsy mahagaga raha miaiky
Fiainam-pirenena Mbola mitohy ny zarazarao hanjakana !
Ankatoka ny fankalazana ny faha-59 taona nahazoan’ny Malagasy ny fahaleovantena. Mino aho, hoy ny filoha lefitry ny komitin’ny fampihavanana Malagasy,
Andry Rajoelina Tsy afa-miala bala intsony
Nitombina tanteraka ny tenin-dRajoelina, roa andro monja taorian’ny latsa-bato natao ny 27 mey tany Frantsa, fa nahazo solombavambahoaka 80 ka hatramin’ny 90.
Fandaniana volam-panjakana Mamahan-dalitra vahoaka ny mpitondra
Ny vavan’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy no nilaza rehefa nandeha ny kiana tamin’ny fandaniam-bola be nataon’ny mpitondra tamin’ny dian’ny filoha tany Sénégal ny volana martsa,
Solontenan’ny mponin’Analalava Mitaky ny fangaraharan’ny valim-pifidianana
Misy ny taratasy misokatra nalefan’ireo solontenan’ny mponin’ny distrikan’Analalava ho an’ny filoham-pirenena manoloana ny hoso-pifidianana niseho tany an-toerana.
Antananarivo Renivohitra Ahoana ny hoaviny ?
Mialoha ny faran`ny volana septambra ho avy izao no tokony hanatanterahana ny fifidianana ben`ny tanàna sy mpanolotsaina.
Antoko sy vondron’antokon’ny filoha Ovaovaina isaky ny misy fifidianana
Tsy manao hoe IRD intsony ny fampahalalam-baovao sasany miaraka amin’i Andry Rajoelina fa hoe IRMAR mantsy ireo depiote lany vonjimaika ho depiote araka ny valim-pifidianana navoakan’ny CENI.
Fampidinana ny vidin-tsolika Nandamoka ny fifampidinihana hatreto…
Nifampidinika teny amin’ny Lapan’Ambohitsorohitra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo mpandraharaha ny solika omaly alatsinainy 17 jona.
Arabe Andrianampoinimerina Analakely Voadio ny tatatra lehibe
Tontosa ny fanadiovana sy fanamboarana tatadrano lehibe na ovoïde tao ambanin’ny Arabe Andrianampoinimerina eo Analakely.
Edito Inona indray no kajy ?
Tontosa indray aloha iny ny fanambarana ny voka-pifidianana tsy ofisialy fanindroany nataon’ny vaomiera misahana izany na ny CENI.
Fahasalamana Marary fo ny 30 ka hatramin’ny 40 %-n’ny Malagasy
Ny 30 ka hatramin’ny 40 %-n’ny olona eto amintsika no fantatra fa tratry ny aretim-po, izay tsy hanavahana taona. 10 ka hatramin’ny 20 isan’andro ho an’ny dokotera iray ny marary tonga manatona ny Institut d’hygiene social etsy Analakely.
FATY HITA TEO AMORON-DRANO
Fatim-behivavy tokony ho eo amin’ny 18-20 taona eo no hitan’ny fokonolona teo amin’ny
Herisetran’ny polisy tany Phoenix Etazonia Mangataka onitra 10 tapitrisa dolara ilay fianakaviana
Niala tsiny noho ny fihetsika mahery nataon’ny polisy tamina fianakaviana mainty hoditra efa-mianaka ny ben’ny tanànan’i Phoenix any Etazonia.
Egypta Maty teo am-pitsarana azy i Mohamed Morsi
Afaka namaly ny fanontanian’ireo mpitsara nandritra ny 20 minitra ary dia nitambotsitra tampoka avy eo i Mohamed Morsi.
Herinaratra azo avy amin`ny rano Manana tombony i Madagasikara
Nosy efatra eto amin`ny ranomasimbe indianina miaraka amin`i Madagasikara no miara-midinika sy mizara traikefa ny amin`ny lafiny herinaratra.
Fisondrotam-bidim-piainana Vahaolana ny fahaiza-mifehy ny baingam-bola
Tsy misy afa-tsy ny fahaiza-mifehy ny vola mivoaka mivezivezy ivelan’ny Banky na ny baingam-bola ankapobeny (Masse Monetaire) no ahafahana mifehy ny fidangam-bidim-piainana.
Fanomezan-dra Mihena hatrany ireo mazoto manao azy
Mbola tena ambany ny tahan’ireo olona mazoto manome ra maimaimpoana eto amintsika.
Kilalao mampidi-doza eny an-tsena Ankizy telo no efa nampidirina hopitaly
Ahitana karazana kilalao mampidi-doza miparitaka eny an-tsena amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona izao.
Raharaham-pihavanana efa nandoavana 5 tapitrisa Miandry fitsarana any am-ponja ilay mpamily nahafaty tovolahy
Maty momoka ny fifanarahana. Tsy misy idiran’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ny raharaham-pihavanan’ny lozam-pifamoivoizana ny 9 jona teo, izay efa nandoavana 5 tapitrisa ariary manoloana ny fahafatesana.
Lalam-pirenena faha-34 Taksibrosy iray tratry ny tifitra variraraka
Omaly alatsinainy 17 jona tokony ho tamin’ny 1ora maraina no nisy taksibrosy tany amin’ny RN34 avy any Miandrivazo hihazo an’Antananarivo no notifirin'ny dahalo.
Trafikana vokatra fanondrana Jirofo halatra 8 taonina tratra niaraka amin’ny taratasy hosoka
Mbola karohina ireo atidoha nikotrika ny taratasy hosoka saika hitondrana ilay voly fanondrana halatra 8.000 kg na 160 kitapo.